फास्टफुड पुस्ताले जान्नैपर्ने कुरा, खानेकुरा कसरी सेवन गर्ने ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
फास्टफुड पुस्ताले जान्नैपर्ने कुरा, खानेकुरा कसरी सेवन गर्ने ?
अहिलेका पुस्ता फास्टफुडमा लोभिएका छन् । उनीहरु आफ्नो भान्साको खानामा होइन, बजारको खानामा अभ्यस्त छन् । किनभने यो पुस्तालाई छिटो र मिठो खानेकुरा चाहिन्छ । राम्ररी चपाएर, आनन्दपूर्वक खाना खाने धैर्यता कहाँ छ र ?
जतिबेला कुनै खानेकुराको तलतल लाग्छ, हातैमा खानेकुरा आइपुग्नुपर्छ । यस्ता खानेकुरा उनीहरु उभिएरै सिध्याउँछन् । खानेकुरा कस्तो खाने, किन खाने प्रश्नहरुसँग उनीहरु अलमल गर्दैनन् । वस्, स्वादिलो चाहियो । जिब्रो लठ्याउने चाहियो ।
खानेकुरा किन सेवन गरिन्छ ? अघाउनका लागि ? पेट भर्नका लागि ? जिब्रोको तलतल मेट्नका लागि ? यी आशिंक कारण हुन् । मूल कारण भनेको शरीरलाई स्वस्थ्य एवं निरोगी राख्नका लागि हो । किनभने शरीरले खानेकुराबाटै पोषकतत्व ग्रहण गर्छ । त्यही पोषकतत्वले हाम्रो शरीरलाई निरोगी, तन्दुरस्त राख्छ ।
बिहानको खाना तिमी खानु, मध्यन्हको साथीसँग बाढेर खानु र रातको खाना सत्रुलाई दिनु
अहिलेका फास्टफुड पुस्ता अबेरसम्म सुत्छन् । मध्यरातसम्म जागा रहन्छन् । उनीहरु मध्यन्ह खानेकुरा खान्छन् । रातभर पनि खाइरहन्छन् । जबकी हाम्रो पाचन यन्त्र सूर्योदयको दुई घण्टापछि बढी सक्रिय र प्रबल हुन्छ भने साँझ सूर्योअस्तअघिसम्म यो अवस्था रहन्छ । त्यसैले यही समय अवधीमा खानेकुरा सेवन गर्नु शरीरका लागि बढी लाभदायक हुन्छ ।
एउटा लोक उक्ति के पनि छ भने, ‘बिहानको खाना तिमी खानु, मध्यन्हको साथीसँग बाढेर खानु र रातको खाना सत्रुलाई दिनु ।’ यसको अर्थ बिहानदेखि रातीसम्म खानाको मात्रा क्रमस घटाउँदै लानुपर्छ ।
हातमा राखेर, उभिएर खानेकुरा सेवन गर्नु राम्रो होइन । टुटेफुटेको भाँडावर्तनमा खानेकुरा सेवन गर्नु पनि ठिक होइन ।
दिसापिसाब लागेको बेला, कलहको माहौलमा खाना सेवन गर्नु हुँदैन ।
पस्किसकेको खानाप्रति कहिल्यै गुनासो गर्नु हुँदैन । इष्र्या, भय, क्रोध, रोग, दीनभाव, द्वेषभावका साथ गरिएको भोजन पच्दैन । उभिएर, जुत्ता लगाएर खानेकुरा सेवन गर्नु पनि ठिक होइन ।
धेरै गरिष्ठ भोजन, अर्थात माछामासु, गेडागुडी, चिल्लोचाप्लो लगायत धेरैथरीका परिकार एकसाथ सेवन नगरौं । धेरै तितो र धेरै गुलियो खानेकुरा सेवन नगरौं । अरुले छाडेको खानेकुरा सेवन नगरौं । अनादरयुक्त, अपहेलनायुक्त ढंगले पस्किएको खानेकुरा सेवन नगरौं ।
के -के नखाने ?